मुख्यमन्‍त्री राईलाई प्रदेशसभा भंग गरेर देखाउन आचार्यको चुनौती – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
मुख्यमन्‍त्री राईलाई प्रदेशसभा भंग गरेर देखाउन आचार्यको चुनौती
८ फाल्गुन, २०७७ १८:२१ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश-१ इन्चार्ज भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रदेशसभा भंग गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। कथित दलको विधानको हवाला दिएर मुख्यमन्त्री राईले सभामुख, उपसभामुख र सांसदलाई प्रदेशसभा भंग गर्ने भन्दै धम्क्याएपछि आचार्यले यस्तो चुनौती दिएका हुन्।
‘हामी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा छौँ। जनताले साथ दिएका छन्। यसलाई घुँडा टेकाएर छोडिन्छ। मुलुकलाई संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याइन्छ। साभामुख, उपसभामुख र सांसदलाई तर्साउन खोज्ने ? यो कुरा लोकतन्त्रमा चल्दैन। धम्कीले कोही डराउँदैन’, आचार्यले भने, ‘यदि तागत छ भने भंग गरेर देखाए हुन्छ। चुनौती दिन चाहन्छु। म चुनौती दिन चाहन्छु, भंग गरेर देखाए हुन्छ। हामी त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्छौँ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुचारु गरछौँ।’
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका आचार्यले मुख्यमन्त्रीको धम्कीको कडा प्रतिवाद गर्नेसमेत बताए।
‘अल्पमतको सरकारलाई जी हजुरी गरेर छोडिदिएदेखि प्रतिनिधिसभा पनि रहने प्रदेशसभा पनि कायम रहने ?’, प्रश्न गर्दै आचार्यले भने, ‘ल त अल्पमतमा पर्यौँ अब तिमी छोड लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले चल भन्दा प्रदेशसभा भंग गर्ने ? यस्तो धम्कीले कोही पनि डराउँदैन। त्यो भएमा हामी कडा प्रतिवाद गर्छौँ।’
संविधानले नै २५ प्रतिशत सांसदलाई सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न अधिकार दिएको भन्दै यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पन्छाएर धम्क्याउने कुरा गलत भएको बताए। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका आचार्यले अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीलाई सोधेर दर्ता नहुने प्रष्ट पारे।
‘लोकतान्त्रिक तवरले अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ। संविधानले २५ प्रतिशत सांसदलाई सरकारविरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो दर्ता भएपछि प्रक्रियामा लानुपर्छ। प्रकियामा लगेर भोटिङ गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। आफूसित बहुमत छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हाल्न मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने रे ! उसलाई सोधेर मात्र हाल्न पाइने ? यस्तो नचाहिँदो कुरा गरेर सत्ताको आडमा मान्छेलाई धम्क्याउने कुरा गलत हो।’
प्रदेश १ का सत्तापक्षीय सांसदले आफ्नै सरकारले बोलाएको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको भन्दै आचार्यले आक्रोश व्यक्त गरे। अविश्वासको प्रस्ताव सडकमा टाउका गन्ने नभएर सांसदमा टाउको गन्ने प्रक्रिया भन्दै त्यसलाई अवरुद्ध गर्नु नहुनेमा जोड दिए।
‘यो सडकमा टाउका गन्ने कुरा होइन। हामीले संसदमा टाउको गनेका छौँ। संसारमै नभएको निर्लज्जता प्रदर्शन गरेर आफैले बोलाएको संसद आफैँ अवरोध गर्ने ?’, थप प्रश्न गर्दै आचार्यले भने, ‘आफै संसद चल्न नदिने ? आफै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिने ? आफै बहुमत कता छ भनेर प्रक्रियामा अवरोध गर्ने ?’
आचार्यले आइतबारका लागि बोलाएको बैठक लगातार सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा सभामुख, उपसभामुख र सांसदले खुट्टा कमाउनु नहुने बताए। ९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा ४७ सांसद आफ्नो पक्षमा देखाउनसमेत उनले मुख्यमन्त्री राईलाई चुनौती दिए। उनले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेमा कांग्रेसले साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रदेश १ मा नेकपाका ६७ सांसदमध्ये सभामुख र उपसभामुखबाहेक ६५ सांसद रहेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि अहिले त्यो संख्या ४० पुगेको दाबी आचार्यको छ। प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१, जसपाका ३, लिम्बुवान र राप्रपाका १/१ गरेर कुल ९३ जना सांसद छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ। केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले एउटा समूहको नेतृत्व गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्को समूहको नेतृत्व गरेका छन्। यसको प्रभाव प्रदेश सरकारसम्म देखिएको छ। नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रदेश १ र बागमतीमा आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।